PN MİLGEM waa tillaabada labaad ee muhiimka ah ee howlaha dib u dhiska maraakiibta. Munaasabadda Ship Spine Sleding Ceremony ”ayaa lagu qabtay Arbacadii, Juun 2 Taliska Shipyard Command ee Magaalada Istanbul. Maareeyaha Guud ee ASFAT Esad Akgün, Maareeyaha Guud ee TGM [More ...]
Nidaamka Siiriya wuxuu kiraystay degmadii taariikhiga ahayd ee Xarunta Tareenka ee Hicaz, oo laga dhisay badhtamaha Dimishiq dabayaaqadii qarnigii 19aad xilligii Cusmaaniyiinta, muddo 45 sano ah shirkad gaar loo leeyahay oo aan la shaacin oo u beddelay hudheello dalxiis iyo hawlo ganacsi. Ilaha rasmiga ah ee xukuumada Siiriya, tareen taariikhi ah oo kuyaala caasimada Dimishiq [More ...]
Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca, Wasiirka Caafimaadka ee Xiriirka Ruushka Wuxuu la kulmay Mikhail Murashko iyada oo loo marayo habka wadahadalka fiidiyowga. Labada wasiir caafimaad ee labada dal ayaa iska kaashanaya oo iska kaashanaya sidii loo horumarin lahaa talaalka Covid-19 [More ...]
Kadib Covid-19, waxay dalbatay cunnada Turkiga. Hindiya, waa dalka labaad ee ugu dadka badan dunida, iyo Singapore oo ka timaada xarumaha ganacsiga ugu muhiimsan adduunka waxay dalban karaan cunnada Turkiga. Jaaliyadaha Dhoofinta Aegean: “Cudurka Infekshan ku dhaca Coronary Infection [More ...]
Chengdu J-20 waa jiilka shanaad ee mataanaha mashiinka ugaarsiga dhalmada ee ay dhiseen Kooxda Wershadaha Duulista ee Chengdu. J-20 waxay duullimaadkeedii ugu horreeyay sameysay Janaayo 11, 2011 waxayna shaqeysay sanadkii 2017. Dadka Shiinaha [More ...]
Agaasimaha Tareenka Siiriya Necip El Fares ayaa sheegay in boqolkiiba 90 tareennada u dhexeeya Aleppo iyo Dimishiq, oo ay dileen mintidiintu, la dayactirey, ayna rajeynayaan in safarka tareenka uu ku bilaaban doono tareenka laba bilood ka dib. [More ...]
Wadada tareenka ee cusub ee loo aasaasay gaadiid xamuul oo qaada inta udhaxeysa Shiinaha iyo Turkmenistan, tareenka xamuulka qaada ee ka tagaya Jinan Nan oo ah xarunta Shiinaha ayaa soo gaarey xarunta Gıccak ee Turkmenistan iyadoo loo sii marinayo saldhigyada xuduudaha Kazakhstan Horgos, Altınkol iyo Bolaşak. [More ...]
Wadashaqeynta Wadada Tareenka ee u dhaxaysa Turkmenistan, Uzbekistan iyo Iran
Markay ahayd Maajo 21, 2020, wadahadallo ayaa lagu qabtay maamullada Tareenka Waddanka Turkmenistan, Jamhuuriyadda Uzbekistan iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, ee ku saabsan dhismaha Hay'adda Waddooyinka Tareenka ee Turkiga. Intaa waxaa u dheer, Maamulka Waddooyinka Waddanka Uzbekistan iyo RAI "Railways Republic of Islamic" [More ...]
Markii la dhammaystiro khadka xawaaraha sare ee u dhexeeya Tokyo iyo Osaka, wakhtiga safarka kala badh wuxuu bilaabey xilli cusub safarka tareenka. Shinkansen waxaa la furay wax yar ka hor Ciyaarihii Olombikada Xagaaga ee 1964 ee Tokyo (oo macnaheedu yahay "xariiq cusub" Jabbaan) [More ...]
Wadada Tareenka Trans-Siberian, oo soo martay wado qatar ah oo ah 10.000 km, waxaa la dhammeeyay 1916, waa tareenka ugu dheer uguna qaalisan abid la dhisay. Tareenka Trans-Siberian-ka wuxuu yareeyaa wadada, oo bilooyin ka qaadata Moscow illaa Vladivostok, illaa sideed maalmood. [More ...]
In kasta oo buugaagta Barry S. Turner iyo Michael Radford, oo loo arkay inay yihiin ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo taariikhi ah oo taariikhi ah oo taariikhi ah ee tareenka safarka ah ee ku tegi jiray Qubrus, oo astaantooda ku hayey xilligii Boqortooyada Ingiriiska, ayaa sidoo kale la adeegsaday, iyo macluumaadka laga helo waayeelka ku nool waagaas. [More ...]
Saluk station waxaa la dhisay sanadkii 1906 (Hijri 1324). 31. Xaruntan ayaa ah mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan uguna weyn ee ku taal khadka Tareenka Hicaz. Xiisaha loo qabo xaruntan ayaa ah muhiimadda magaaladan [More ...]
Saldhigga Muhit, oo la dhisay 1909 (Hijri 1327), waa 19km oo u jirta xarunta dabka. Marka laga soo tago dhismaha saldhiga weyn, waxaa sidoo kale jira barrack xaalad wanaagsan oo ku hareereysan baararka. Sidoo kale hareeraha [More ...]
Waxaa la dhisay sanadkii 1909 (Hijri 1327), idaacadani waxay 13km u jirtaa saldhigii hore. Meeshani waxay ka kooban tahay oo keliya dhismaha saldhiga. Saldhigga, oo leh wax la mid ah saldhigyadii hore, waa laba dabaq oo weyn [More ...]
Waa mid ka mid ah saldhigyadii ugu dambeeyay uguna muhiimsanaa ee khadka tareenka Hicaz. Idaacadan ayaa 15 km u jirta xaruntii hore. Saldhigga laga sameeyay dhagaxa madow wuxuu daboolayaa dhismayaal badan. Dhererkeedu waa 600 mitir, ballaadhkeeduna yahay 400 mitir [More ...]
Xarunta Tareenka Xawaaraha Sare ee Medina
Shirkadda Turkiga ee Yapi Madinah High Station Train Station waxay ku fadhido masaafo dhan 450 Km Mashruuca Xawaaraha Xawaaraha Sare oo isku xireysa magaalooyinka Makkah, Jeddah, King Abdullah City City iyo Madiina, oo lagu soo gabagabeeyey Sacuudiga. [More ...]